मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल दशरथ रंगशालामा हुने, तयार होला रंगशाला ? | Hamro Khelkud
मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल दशरथ रंगशालामा हुने, तयार होला रंगशाला ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रंगशाला २०७२ को भूकम्पले क्षतविक्षत बनेको थियो । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लाई मध्यनजर गर्दै रंगशालाको पुर्ननिर्माण कायै भैरहेको छ । साग नजिकिदै गर्दा रंगशालाको निकै सुस्त गतिमा पूर्ननिर्माण कार्य भैरहेको छ ।
यस्तै अवस्थामा मदन भन्डरी स्पोर्टस् एकेडेमीले आगामी माघ दोस्रो साताबाट दशरथ रंगशालामा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडमीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै रंगशाला निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिनको लागि प्रतियोगिता दशरथ रंगशालामै आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराए । प्रतियोगिता माघ ९ देखि १९ गतेसम्म हुनेछ ।
‘हाम्रो प्रतियोगितासम्म दशरथ रंगशाला निर्माण भैसक्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । रंगशालाको पूर्ननिर्माण कार्य भैरहेको छ । दशै अघि हामीले प्याराफिट तयार हुने खबर पाएका छौं । अहिले प्याराफिट सरसफाई भैरहेको छ ’ एकेडेमीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘यो रंगशाला छिटो पुर्ननिर्माणका लागि दवावजस्तो कार्यक्रम पनि हो । हामी निरन्तर दबाब दिनेछौं । निश्चित समयसम्म तयार नभए हामीले विकल्पमा अन्य मैदान पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो चाहना रंगशालामै प्रतियोगिता गराउने रहेको छ ।’ उनले प्रतियोगिता निरन्तर आयोजना हुने पनि जानकारी दिए ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेले रंगशाला ९९ प्रतिशत तयार रहेको बताए ।
प्रतियोगितामा नेपालबाट नेपाल ‘रातो’ र नेपाल ‘निलो’ दुई टिम र चार विदेशी टिम गरि ६ टिम हुने आयोजकले जनाएको छ । आयोजकले विदेशी क्लब ६ टिम हुन सक्ने पनि बताएको छ । एकेडमीले दक्षिण कोरिया, चीन, भुटान, बंगलादेश, भारत र थाइल्याण्डलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।
यस्तै एकेडमीले एन्फाबाट स्वीकृती लिइसकेको र प्रतियोगितालाई मान्यता दिलाउन फिफा र एएफसँग पहल भैरहेको र प्रतियोतिामा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय टिमहरुसँग समन्वय एन्फा मार्फन हुने छ ।
६ या ८ टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ । लिगकम नकआउटको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् । विजेताले २५ हजार अमेरिकी डलर पाउनेछन् ।
यस्तै दोस्रो हुनेलाई १० हजार अमेरिकी डलर प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फरवार्ड, मिडफिल्डर, डिफेन्डर, गोलकिपर र प्रशिक्षकलाई समान १ हजार अमेरिकी डलर दिइने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिव १ करोड ५० लाख खर्च हुने आयोजकले अनुमान गरेको छ ।